Akwụkwọ Akụkọ mkpirikpi
Black, White, na Shades nke Grey
Onye edemede America bụ Toni Morrison (b 1931) bụ maka ụfọdụ n'ime akwụkwọ ndị kasị sie ike ma dị egwu banyere agbụrụ na narị afọ nke 20 na 21. The Bluest Eye (1970) na-enye onye protagonist onye na-achọ ịdị ọcha na anya anụnụ anụnụ. Na 1987 Pulitzer Prize-winning A hụrụ n'anya , nwa nwanyị a gbapụrụ agbapụ na-agba ya ụta site na nwa nwanyị ọ gburu ka o wee nwee ike ịhapụ ya - ma ọ bụ n'ejighị obi - site n'ịbụ ohu.
Ọ bụ ezie na Paradaịs (1997) na-eji usoro akara ụda amalite, "Ha na-ebufe nwa agbọghọ ahụ na-acha ọcha, ma ndị ọzọ nwere ike wepụta oge ha," a naghị agwa onye na-agụ akwụkwọ nke onye edemede ahụ dị ọcha.
Morrison na-edekarị obere akwụkwọ akụkọ, yabụ mgbe o mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịnọdụ ala ma gee ntị. N'ezie, 'Recitatif,' site n'afọ 1983, a na-ewere ya na ọ na-ebipụta obere akụkọ. Ma 'Ụtọ', ihe e dere na akwụkwọ Morrison bụ Chineke Help the Child (2015) ka e bipụtara na New Yorker dịka otu ihe na-eguzo naanị ya, n'ihi ya, o yiri ka ọ dị mma iji ya dị ka obere akụkọ. N'ihe odide a, ị nwere ike ịgụ 'Ụtọ' maka n'efu na New Yorker .
Site na echiche nke Sweetness, nne na-egbuke egbuke nke nwa nwa gbara akpụ, akụkọ ahụ na-emepe site n'ichebe nchebe ndị a: "Ọ bụghị m kpatara ya, ya mere, ị pụghị ịkatọ m."
Na elu, ọ na-egosi na Ụtọ na-agbalị imepụ onwe ya pụọ ​​na ikpe mara nke ịmụ nwa nwanyị "ọ bụ oji ka ọ tụrụ egwu m." Ma na njedebe nke akụkọ ahụ, otu onye na-enyo enyo na ọ nwere ike inwe obi amamikpe banyere ụzọ siri ike o si emeso nwa ya nwanyị, bụ Lula Ann.
Ruo n'ókè ha aṅaa ka obi ọjọọ ya mere ka o nwee nchegbu n'ezie na ọ dị ya mkpa ịkwadebe Lula Ann maka ụwa nke ga-emesị mee ya n'ụzọ na-ezighị ezi? Ruo n'ókè ha aṅaa ka ọ malitere nanị site ná nnupụisi ya megide ọdịdị Lula Ann?
Na 'Ụtọ,' Morrison na-achịkwa agbụrụ na agba akpụkpọ na ụdị dị iche iche.
Ọ bụ ezie na ụtọ bụ African-American, mgbe ọ hụrụ akpụkpọ anụ nwa ya, ọ na-eche na ihe dị "ihe ọjọọ .... Nwa ahụ na-emechu ya ihu. Achọpụta ihe dị ụtọ na ọchịchọ ịmịcha Lula Ann na blanketị, ọ na-ezo aka na ya na okwu mkparị ahụ bụ "pickaninny," ọ na-ahụkwa ụfọdụ "nro" gbasara anya nwatakịrị ahụ. Ọ dị anya site na nwa ahụ site n'ịgwa Lula Ann ka ọ kpọọ ya "Ụtọ" karịa "Mama."
Agba akpụ akpụ Lula Ann na-emebi alụmdi na nwunye ndị mụrụ ya. Nna ya kwenyesiri ike na nwunye ya aghaghị inwe ihe omume; ọ na-aza site na ikwu na akpụkpọ anụ ahụ ga-esi n'akụkụ ya nke ezinụlọ ya pụta. Ọ bụ aro a - ọ bụghị ya na-aghọta ekwesịghị ntụkwasị obi - nke na-eme ka ọ pụọ.
Ndị ezinụlọ Sweetness enweela mgbe niile ka ọtụtụ n'ime ha na-ahọrọ ka ha "gafee" maka ọcha, na ụfọdụ na-ebelata ihe niile ha na ndị ezinụlọ ha nwere ike ime. Tupu onye na-agụ ya enwee ohere ịchọrọ anya na ụkpụrụ ndị dị na ebe a, Morrison nwere onye nke abụọ iji belata echiche dị mkpirikpi. Ọ na-ede, sị:
"Ụfọdụ n'ime gị nwere ike iche na ọ bụ ihe dị njọ ijikọta onwe anyị dị ka agba akpụkpọ ahụ - ihe na-eme ka ọ dị mma ..."
Ọ na - eso nke a na ndepụta nke ụfọdụ n'ime mkparị ndị na - agbakọta dị ka ọchịchịrị nke akpụkpọ anụ ya si dị: ịbụ ndị na - atụgharị n'elu ma ọ bụ na - agbadata, na - amachibido ịgba mbọ na - agba chaa chaa ma ọ bụ jiri ụlọ ndozi na ụlọ ahịa, ebe a chọrọ ka ị ṅụọ " isi iyi mmiri, ma ọ bụ "na ebubo nickel na onye na-ere ákwà maka akpa akwụkwọ nke bụ n'efu nye ndị na-acha ọcha."
N'inye ndepụta a, ọ dị mfe ịghọta ihe mere ụfọdụ ndị òtù Sweetness ji họrọ iji nweta ihe ọ na-akpọ dịka "ihe ùgwù akpụkpọ ahụ." Lula Ann, ya na akpụkpọ anụ ya, agaghị enwe ohere ime nhọrọ dị otú ahụ.
Lula Ann na-ahapụ Ụtọ na ohere mbụ ma na-aga California, dịka o siri ike. Ọ ka na-eziga ego, mana ọ gwaghị ya okwu ọma. Site na njem a, Ụtọ na-ejedebe: "Ihe ị na-eme ụmụaka bụ ihe gbasara ha, ha agaghị echezọ ọzọ."
Ọ bụrụ na ọrịre kwesịrị ka ọ bụrụ ụta ọ bụla, ọ nwere ike ịbụ maka ịnakwere ikpe na-ezighị ezi n'ụwa kama ịnwa ịgbanwe ya. O juru ya anya nke ukwuu ịhụ na Lula Ann, dị ka okenye, na-egbu egbu ma na-eji oji ya "nye ya uru na uwe ọcha mara mma." O nwere ọrụ na-aga nke ọma, dị ka Sweetness kwuru, ụwa agbanweela: "Blue-ojii niile na-ekpuchi telivishọn, na magazin ejiji, azụmahịa, ọbụna na-eme fim." Lula Ann bi n'ụwa nke Ụtọ na-echeghị na ọ ga-ekwe omume, nke na ụfọdụ ọkwa na-eme ka ihe mara mma n'ime nsogbu ahụ.
Ma obi ụtọ, n'agbanyeghị ụta ụfọdụ, ọ gaghị ata onwe ya ụta, na-asị, "Amaara m na m mere ihe kacha mma maka ya n'okpuru ọnọdụ." Lula Ann na-achọ inwe nwa nke aka ya, ma na-atọ ụtọ na ọ ga-achọpụta otú ụwa "si agbanwe mgbe ị bụ nne ma ọ bụ nna."
8 Mkparịta ụka Ngwá Agha Ukwu Maka Ụmụaka
Analysis of 'Daily Daily Use' site n'aka Alice Walker
Nyocha nke 'Ezi madu di ike icho' site na Flannery O'Connor
Nyocha nke 'ugbo' site n'aka Raymond Carver
Nyocha nke 'Otu esi ekwu okwu banyere dinta' site na Pam Houston
Akụkọ ụmụaka banyere ekele
Gịnị Bụ Flash akụkọ ifo?
Ọnwụ 'Ụbọchị Abụọ Abụọ nke Henry Henry'
Na nyocha miri emi nke 'Sonny's Blues' site James Baldwin
Esi edere mkpirikpi ihe akuko banyere ihe siri ike
Nkọwa nke 'Mechanics Magburu onwe' site n'aka Raymond Carver
Kedu Ikike Omume Kasị Mma Na-arụ Ọrụ Kasị Mma?
Esemokwu dị n'agbata 'ntinye' na 'ngosi'
Foto dị na Charlemagne
Ndị mmadụ nwere nnukwu efere dịka onye ọrụ egwu na onye nlekọta
8 Ihe mere ịzụta onye ala
Ezigbo mmekọrịta ezinụlọ
Ọdịiche Dị n'etiti Ndị Mmụọ Ozi na Nduzi Mmụọ
Akwụkwọ na-agba akwụkwọ na akwụkwọ ozi ma ọ bụ Email
Otu esi achọta ọzụzụ ndi okenye ma nweta GED na Michigan
Ngwú Powing na Baking Soda
Okwu dị mfe
N'ụbọchị Dị aṅaa Ka Kraịst Si n'Ọnwụ Nwụrụ?
Nkọwa na Ihe Nlereanya nke Ọnọdụ Ọdịmma
Ihe nchịkọta kacha mma 5 kachasị mma maka ndị egwuregwu
Ụdị Christmas Panov nke Panov: Nkọwapụta na Nyocha
Nkọwa Akpọrọgwụ (Chemistry)
Kedu ihe bụ Graceland Mansion? Ụlọ nke Eze
Ndị Heroes ruo Zeros: Ụlọ Egwuregwu nke Baseball na World Series
Ụlọ ọrụ GPA, SAT, na ACT Data University
Ngwurugwu Adigide Na-atụgharị Anya
Oge anọ - Science, Literature na Social Studies Unit
Ihe Nile Banyere Ọrịa Ọrịa
The History of Formation of South Africa
7 Eziokwu na-adọrọ mmasị banyere Penguins